The listed companies include the First Myanmar Investment Co. Ltd, First Private Bank, Great Hor Kham Public Co. Ltd, Myanmar Agribusiness Public Co. Ltd, Myanmar Citizen Bank and Myanmar Thilawa SEZ Holding Limited. "They are the best of the best," Dr Maung Maung Thein said of the selected listed firms. (SECM ၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်း မှ YSE တွင် ရွေးချယ်ခံရသော ကုမ္ပဏီ (၆-ခု)ဖြစ်တဲ့ FMI ၊ ပထမပုဂ္ဂလိဂ္ဂ အများပိုင်ကုမ္ပဏီ၊ GREAT FORHAM အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ၊ MAPCO အများပိုင်ကုမ္ပဏီ ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်အများပိုင် ကုမ္ပဏီ နှင့် သီလ၀ါ အများပိုင် ကုမ္ပဏီတို့မှ တရားဝင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသွားသည်ဟု ဆိုပါတယ်။
The YSX is jointly owned by the Myanmar Economic Bank (51 percent), Daiwa Institute of Research (30.5 percent) and the Japan Exchange Group (18.5 percent). The three investors have spent 32 billion kyat (US$ 24.8 million) on setting the YSX up. (ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ (၅၁%)၊ DAIWA မှ (၃၀.၅%)၊ ဂျပန်စတော့အိပ်ချိန်းမှ (၁၈.၅%) ဖြင့် အစုစပ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုငွေ 32 Billion Kyats (US$ 24.8 Million) ဖြင့် စတင်လည်ပတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Myanmar’s first official bourse - the Yangon Stock Exchange (YSX) - opened on Wednesday with six listed public local companies whose shares will not be traded till March because the bourse’s digitalised trading system is not yet operational, Securities and Exchange Commission Myanmar (SECM)'s chair Dr Maung Maung Thein said. (SECM ၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်သိမ်း မှ Stock Exchange Listed ကုမ္ပဏီများမှာ အင်တာနက် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်မစတင်နိုင်သေးသည့်အတွက် မတ်လနောက်ပိုင်းမှ တရားဝင်စတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်)